Fantaro ireo dingana teo aloha alohan'ny hifindranao amin'ny Windows mankany OS X | Avy amin'ny mac aho
Ataovy milamina araka izay azo atao ny famindrana avy amin'ny Windows mankany OS X
Raha mieritreritra ny hampiato ny PC taloha ianao ary mahazo Mac vaovao mandritra io fialan-tsasatra io fa mbola tsy azonao antoka tsara ny fanovana entiny. Hanampy anao izahay hanapa-kevitra amin'ireto dingana tsotra ireto izay tsy maintsy raisininao alohan'ny hanatanterahana izany.
Voalohany indrindra, manonona ihany koa fa ny fiovana tafiditra dia tsy mahery vaika mihitsy ary indrindra raha mampiasa ny fitaovana ianao amin'ny asan'ny automatisation birao, haino aman-jery ary fizahana tranonkalaNy fahazarana amin'ny tontolo vaovao dia mora kokoa noho ny toa priori.
Mbola atolotra mahazoa OS OS teo aloha raha efa ao an-tsainao ny manao ny fanovana.
Ary noho izany raha manana Apple Store na mpivarotra ara-dalàna eo akaiky eo ianaoNy fomba mora indrindra dia ny mandeha manao fikarohana kely ao amin'ny rafitra, mametraka fanontaniana amin'ireo mpiasa izay akaiky anao hamahana ny fisalasalana.
Mazava ho azy fa na dia tsy mahery vaika aza izany dia tsy tsara ny hanovana ny fitaovantsika raha miankina aminy matihanina isika, satria raha amin'ny fotoana be atao, fanovana rafitra mety ho be.
1 Fampiharana hampiasaina
2 Fifindra-monina data
3 Fitambaran-dàlana fitendry
Raha tsy hoe mihazakazaka Windows amin'ny Mac ianao amin'ny BootCamp na amin'ny alàlan'ny rindrambaiko virtualisation azyTokony hotadidinao fa ny rindranasa Windows dia tsy azo alefa amin'ny Mac, noho izany dia tokony hahita fomba hafa amin'ny Mac ianao.
Na izany aza ny suite sasany toa ny Adobe Creative Cloud avelao hanova fampiharana eo Mac sy Windows miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mitovy amin'izany, indrisy fa tsy azo esorina amin'ny safidy hafa io.
Ny dingana manaraka manandanja indrindra dia ny fitondrana ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny PC mankany amin'ny Mac vaovao, ka tsy maintsy fantarintsika izay hatao mba hanatanterahana izany fifindra-monina izany.
Apple dia manana antontan-taratasy hanaovana izany ary soso-kevitra bebe kokoa noho izany ny tokony hijerentsika sy hahalala ny fomba fampiasana ireo fitaovana fifindra-monina alohan'ny handefasana ny tenantsika hanary vaovao.
Tsindrio ity rohy ity ho afaka hiditra amin'ny fampahalalana ianao ary zava-dehibe ny hitahirizanao azy io satria tokony hanaraka tsara ireo dingana ianao, handinika izay hihetsika sy izay tsy hihetsika.
Ny safidy iray dia ny fanendrena fotoana any amin'ny Apple Store ary asaivo ataon'izy ireo ny asa fanariana backup ho anao.
Misy fiovana vitsivitsy eto, na dia tena miova fotsiny aza ny fandehanana manomboka amin'ny fanindriana CTRL mankany CMD amin'ny hitsin-dàlana maro. Ireto ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra:
Baiko + C - Adika
Baiko + V - Mametaka
Command + A - Safidio ny rehetra
Command + W - Akatona ny varavarankely
Command + Q - Mivoaha ny fampiharana
Iray amin'ireo te hahafanta-javatra izay nahasarika ny saiko indrindra tamin'ny famindrako ho Mac, dia ilay safidy hoe tsy hampandehanana ny menus de konteks miaraka amin'ny bokotra totozy havanana. Amin'izany fomba izany, raha tsy ampidirintsika ao amin'ny System Preferences na tsindrio CTRL eo am-pikihana, dia tsy hahafantatra ilay tsindry ilay rafitra.
Tsy misy safidy CTRL + ALT + DEL eto amin'ny OS X. In ny toerany dia CMD + ALT + ESC mihazakazaka varavarankely izay ahafahantsika manery ny fivoahan'ny fampiharana rehetra manantona ary manome olana ho antsika izany.
Na dia azo antoka sy azo antoka aza ny solosaina Mac misy OS X, mazava ho azy fa tsy tonga lafatra izy ireo. Noho io antony io dia zava-dehibe izany mampiasa Time Machine, endri-javatra natsangana nandritra ny fotoana lava tao amin'ireo kinova OS X samihafa ary hanampy antsika hamerina rakitra, lahatahiry na koa ny sarin'ny rafitra feno amin'ny fotoana iray raha manana olana lehibe amin'ny rafitra izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Ataovy milamina araka izay azo atao ny famindrana avy amin'ny Windows mankany OS X
Aiza no azoko ampiasana ny Machine Machine?
Ary fanontaniana iray hafa koa, manana kapila mafy roa amin'ny endrika NTFS aho. Raha apetrakao ny safidy hamindrana angona, hafindra ao amin'ny mac daholo ve ny angona mba hahafahako mamolavola ireo disk amin'ny endrika exFat? Ary raha eny, ahoana no hataoko mifidy hifindra monina?
LEGO The Lord of the Rings, amidy mandritra ny fotoana voafetra